Abavelisi: HUANET ONU I-China HUANET ONU Umzi mveliso kunye nabaxhasi
I-Anatel No. 069627-21-12314
I-HZW-HG911A (HGU) sisixhobo esincinci se-GPON ONT, esisebenza ekufikeleleni kwe-broadband engaxutywanga.（RJ45）ujongano. IxhasaItekhnoloji ye-2 ye-Ethernet switch kwaye kulula ukuyigcina nokuyilawula.Ingasetyenziselwa ukufikelela kwi-FTTH / FTTP yesicelo sabemi kunye nabasebenzisi beshishini. Imfuneko yezixhobo zeGPON.
1GE + 1FE + CATV + Iimbiza + WIFI XPON ONU
I-HG623-FTW (HGU) yi-G / EPON ONU isixhobo sokuphela , yeyiphi yenzelwe ukufezekisa i-FTTx kunye nemfuno yenkonzo yokudlala kathathu yomsebenzisi womnatha osisigxina. Le bhokisi isekwe kwi-Gigabit G ezinzileyo kwaye ikhulile/ EItekhnoloji ye-PON, enomlinganiso ophezulu wokusebenza kwixabiso, kunye netekhnoloji yoLuhlu 2/3,CATVkunye neVoIP ekumgangatho ophezulu ngokunjalo. Inokuthenjwa kakhulu kwaye kulula ukuyigcina, kunye neQoS eqinisekisiweyo yenkonzo ezahlukeneyo. Iyahambelana ngokupheleleyo nemigaqo yezobugcisa efana ne-ITU-T G.984.x, IEEE802.3ah kunye imfuneko yobugcisa be-G/ EPON Izixhobo.
I-1GE + 3FE + IIPOTI + I-AC WIFI GPON ONU yenye yoluhlu lwee-terminals ze-Gigabit Passive Optical Network ezisuka eShenzhen Huanet Technologies Co., Ltd. Ukuthobela i-ITU-T G.984 GPON imigangatho yamazwe aphesheya, kulungile ekusebenzisaneni noninzi lwayo yonke i-GPON OLT kushishino ngenkxaso ye-OMCI epheleleyo. Ngeendleko ezifanelekileyo, ukuthunyelwa ngokulula, isoftware ezinzileyo kunye nomsebenzi womeleleyo, zilungele ngokukodwa i-FTTH (iFayibha eya eKhaya), kwaye ihlangabezane neemfuno zenethiwekhi ebanzi yokufikelela.
1GE xPON ONT ONU kunye neRouter / Bridage eneAnatel Certification
Anatel No. 044266-19-12230
I-HZW-HG911 (HGU) sisixhobo esincinci se-xPON ONT, esisebenza ekufikeleleni kwe-broadband emsulwa. Ixhasa itekhnoloji yomaleko 2 Ethernet switch kwaye kulula ukuyigcina nokuyilawula.Ingasetyenziselwa ukufikelela kwi-FTTH / FTTP yesicelo sabemi kunye nabasebenzisi beshishini. kunye neemfuno zobugcisa zeXPON
I-HZW-HG643-FW (HGU) sisixhobo esigcina i-GPON ONT, esenzelwe ukuzalisekisa i-FTTx kunye nemfuno yenkonzo yokudlala kathathu yomsebenzisi womnatha osisigxina. Le bhokisi isekwe kubuchwephesha beGigabit GPON ezinzileyo kunye neqolileyo, enomgangatho ophezulu wokusebenza kwixabiso, kunye netekhnoloji yeLayer 2/3, WDM kunye nomgangatho ophezulu weVoIP ngokunjalo. Inokuthenjwa kakhulu kwaye kulula ukuyigcina, kunye neQoS eqinisekisiweyo yenkonzo ezahlukeneyo. Iyahambelana ngokupheleleyo nemigaqo yobuchwephesha efana ne-ITU-T G.984.x kunye neemfuno zobuchwephesha zeGPON Equipment.
I-HG623-W (HGU) sisixhobo esigcina i-GPON / EPON ONT, esenzelwe ukuzalisekisa i-FTTx kunye nemfuno yenkonzo yokudlala kathathu yomsebenzisi womnatha osisigxina. Le bhokisi isekwe kubuchwephesha beGigabit GPON obuzinzileyo kunye nobukhulileyo, obunomlinganiso ophezulu wokusebenza kwixabiso, kunye netekhnoloji yeLayer 2/3, Ithembeke kakhulu kwaye kulula ukuyigcina, ineQoS eqinisekisiweyo yenkonzo ezahlukeneyo. Iyahambelana ngokupheleleyo nemigaqo yobuchwephesha efana ne-ITU-T G.984.x kunye neemfuno zobuchwephesha zeXPON Equipment.
I-Sfp C ++, Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Ixabiso leHuawei Olt, IHuawei Qsfp +,